Levitikus 27 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
27 Waqhubeka uYehova ethetha kuMoses, esithi: 2 “Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, ‘Xa athe umntu wenza umnikelo wesibhambathiso esikhethekileyo+ wemiphefumlo kuYehova ngokwexabiso elithelekelelwayo, 3 yaye ilelendoda esusela kwiminyaka engamashumi amabini ubudala ukusa kwengamashumi amathandathu eminyaka ubudala, limele ixabiso elo lithelekelelwayo libe ziishekele ezingamashumi amahlanu zesilivere ngokweshekele yendawo engcwele. 4 Kodwa ukuba libhinqa, ngoko ke ixabiso elithelekelelwayo limele libe ngamashumi amathathu eeshekele. 5 Ukuba ubudala buthabathela kominyaka mihlanu kuse kumashumi amabini eminyaka, ngoko ke ixabiso elithelekelelwayo loyindoda limele libe ziishekele ezingamashumi amabini lize elebhinqa libe ziishekele ezilishumi. 6 Ukuba ubudala buthabathela konenyanga enye kuse koneminyaka emihlanu, ngoko ke ixabiso elithelekelelwayo loyindoda limele libe ziishekele ezintlanu+ zesilivere lize lona ixabiso elithelekelelwayo lebhinqa libe ziishekele ezintathu zesilivere. 7 “‘Ukuba ke ubudala buthabathela koneminyaka engamashumi amathandathu nangaphezulu, ukuba uyindoda, ixabiso elithelekelelwayo limele libe ziishekele ezilishumi elinesihlanu lize elebhinqa libe ziishekele ezilishumi. 8 Kodwa ukuba uhlwempuzeke kakhulu ukuba angalifikelela ixabiso elo lithelekelelwayo,+ umele ke ngoko amiswe phambi kombingeleli, aze umbingeleli ambekele ixabiso.+ Umbingeleli uya kumbekela lowo ubhambathisileyo ixabiso elivumelana noko anokukufikelela.+ 9 “‘Ukuba sisilo esinjengezo kwenziwa ngazo umnikelo kuYehova, yonke loo nto ubani anikela ngayo kuYehova yoba ngcwele.+ 10 Akanakuzisa enye endaweni yayo, yaye akanakwananisa elungileyo ngembi okanye embi ngelungileyo. Kodwa ukuba kwenzekile ukuba ananise isilo ngesilo, masibe ngcwele sona kwaneso kwananiswe ngaso. 11 Ke ukuba siso nasiphi na isilo esingahlambulukanga+ esinganikelwayo kuYehova,+ umele asimise isilo eso phambi kombingeleli.+ 12 Wothi ke yena umbingeleli abeke ixabiso laso ngokokulunga nokungalungi kwaso. Ngokokuthelekelela+ kombingeleli, yoba lixabiso laso elo. 13 Kodwa ukuba ufuna ukusithenga kwakhona, umele ongezelele isahlulo sesihlanu+ kwixabiso laso elithelekelelweyo. 14 “‘Xa athe umntu wayingcwalisa indlu yakhe ukuba ibe ngcwele kuYehova, umbingeleli umele amisele ixabiso layo ngokokulunga nokungalungi kwayo.+ Ifanele ibize ngokwexabiso elo umbingeleli alimiseleyo. 15 Kodwa ukuba lowo uyingcwalisileyo ufuna ukuyithenga kwakhona indlu yakhe, umele ke ngoko ongezelele isahlulo sesihlanu kwimali elixabiso layo elithelekelelweyo;+ yothi ke ibe yeyakhe. 16 “‘Ukuba umntu uthe wangcwalisa kuYehova ngenxalenye yentsimi elilifa lakhe,+ ixabiso layo elithelekelelwayo malilinganiselwe ngokwembewu yayo: ukuba yihomere+ yembewu yerhasi, ngoko yoba ziishekele ezingamashumi amahlanu zesilivere. 17 Ukuba intsimi yakhe uyingcwalisa ukususela kunyaka weNtlokoma+ kuse phambili, ifanele ibize ngokwexabiso elithelekelelwayo. 18 Ukuba uyingcwalisa intsimi yakhe emva kweNtlokoma, umbingeleli umele ambalele ixabiso layo ngokweminyaka eseleyo ukusa kunyaka weNtlokoma elandelayo, kuze kuphungulwe kwixabiso elithelekelelwayo.+ 19 Kodwa ukuba lowo uyingcwalisileyo uye wayithenga kwakhona intsimi leyo, umele ke ngoko ongezelele isahlulo sesihlanu kwimali yexabiso elithelekelelweyo, ize ke ngokuqinisekileyo ibe yeyakhe.+ 20 Ukuba akayithenganga kwakhona intsimi leyo kodwa kunoko yasuka yathengiselwa mntu wumbi, ayinakuba sathengwa kwakhona. 21 Ekukhululweni kwayo loo ntsimi ngeNtlokoma yoba ngcwele kuYehova, njengentsimi enikelweyo.+ Yoba lilifa lombingeleli.+ 22 “‘Ukuba uthe wangcwalisa kuYehova intsimi ayithengileyo engeyonxalenye yentsimi elilifa lakhe,+ 23 umbingeleli umele ambalele ixabiso layo elithelekelelwayo ukusa kunyaka weNtlokoma, yaye umele alihlawule ngalo olo suku ixabiso layo elithelekelelwayo.+ Lona loba yinto engcwele kuYehova.+ 24 Ngonyaka weNtlokoma woyibuyisela intsimi leyo kulowo wayithenga kuye, kulowo lilelakhe ilifa lomhlaba.+ 25 “‘Xabiso ngalinye elithelekelelwayo malilinganiswe ngokweshekele yendawo engcwele. Ishekele yoba ziigera ezingamashumi amabini.+ 26 “‘Lizibulo lodwa lesilo, elizalwa njengezibulo likaYehova,+ elingayi kungcwaliswa mntu. Nokuba liyinkunzi yenkomo okanye liyimvu, lelikaYehova.+ 27 Ukuba lelesilo esingahlambulukanga+ yaye emele alikhulule ngokuvumelana nexabiso elithelekelelwayo, umele ke ngoko ongezelele isahlulo sesihlanu kulo.+ Kodwa ukuba alithengwanga kwakhona, limele ke ngoko lithengiswe ngokwexabiso elithelekelelwayo. 28 “‘Kuphela nje makungabikho nanye into enikelweyo emele ithengiswe, athe umntu wayithabatha ezintweni zakhe zonke waza wayinikela kuYehova ukuze itshatyalaliswe,+ enoba ngumntu okanye sisilo okanye yintsimi elilifa lakhe, yaye makungabikho nanye into enikelweyo ethi ithengwe kwakhona.+ Iyeyona nto ingcwele kuYehova. 29 Makungabikho namnye umntu onikelwe kwintshabalalo othi akhululwe.+ Ufanele abulawe afe.+ 30 “‘Sishumi+ ngasinye somhlaba, sembewu yomhlaba neseziqhamo zomthi, sesikaYehova. Singcwele kuYehova. 31 Yaye ukuba umntu ufuna ukusithenga kwakhona isishumi sakhe, ufanele ongezelele kuso isahlulo sesihlanu saso.+ 32 Ngokuphathelele isishumi ngasinye somhlambi weenkomo nesomhlambi wezimvu, yonke into edlula ngaphantsi kwentonga egoso-goso,+ eyeshumi kuzo yoba ngcwele kuYehova. 33 Makangahlolisisi ukuba ilungile okanye imbi, yaye angananisi ngayo. Kodwa ukuba uthe wananisa ngayo, yoba ngcwele yona kwanaleyo kwananiswe ngayo.+ Mayingathengwa kwakhona.’” 34 Yiyo leyo imiyalelo+ uYehova awayinika uMoses njengemiyalelo yoonyana bakaSirayeli eNtabeni yaseSinayi.+